उत्तर होटल को तीन जीवन। आंशिक रूपमा भग्नावशेषबाट पुनर्स्थापना
जून नम्बर तपाईंको ब्रेभेरिकको लागि 1 June बर्षको लागि एक स्वैच्छिक प्रमाणीकरण प्रणाली "
उत्तर जटिल होटेल होटेल
कोठाको उत्तर होटल
होटल ठेगाना उत्तरी
प्रिय पाहुनाहरूले तपाईंलाई सूचित गर्नुहोस् कि उत्तर रेस्टुरेन्ट सामान्य मोड र वितरण मोडमा काम गर्दछ!
रेस्टुरेन्टले परिसर र सूचीको सबै सिफारिशहरूको प्रशंसा गर्दछ सरोकारको माध्यमबाट हातको ह्यान्डल गर्न सहित, एन्टिभिंग र एयर भेन्टिलेसन प्रदान सहित।
हामीले सेवा डेलिभरी सेवा व्यवस्थित गरेका छौं। तपाईं मुख्य, बच्चाहरूको र भोज मेनू घर वा अफिसबाट भाँडाहरू अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ!
<< p> उत्पादन अस्ट्रियन टेक्नोलोजीमा सञ्चालन गरिएको छ, र सही connovissesses जान्नुहोस् कि यो अस्ट्रियन टेक्नोलोजी हो जुन विश्वमा सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ। अनलाइन उत्पादनमा पूर्ण नियन्त्रण असत्यबाट टेक्नोलोजीहरू द्वारा गरिएको छ। यस टेक्नोलोजीले जटिल प्रक्रिया ट्र्याक गर्न मात्र अनुमति दिदैन, आवश्यक भएमा, तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न, जसले तपाईंलाई तुरुन्तै उच्च स्तरमा जान र स्थिर गुणवत्ता कायम गर्न अनुमति दिनेछ।
<< p> आज, हाम्रो "जीवित" बियर लोटोको स्थानीय नेटवर्कमा मात्र बेचिएको छ, तर संघीय स्तरमा स्टोरहरू ", एन्डा" र अन्यहरूको नेटवर्कमा पनि।
कोठा चयन श्रेणी मा आवास
<< p> होटेल "उत्तर" को समुद्री किनार र संगीत थिएटरको समुद्री किनारमा हिड्ने दूरीमा हिड्ने दूरीमा अवस्थित छ। नजिकै - शहर पार्क र वर्ग, क्याफे, रेस्टुरेन्टहरू, किनमेल केन्द्रहरू। रेलवे स्टेशन - कार द्वारा minutes मिनेट, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट टाढा223 किलोमिटर टाढा छ।
हिउँ-सेतो स्तम्भहरू बाट होटेलको चार-कुण्डल भवन लेनिनको सडकहरू र फ्रेडरिक ईन्गाको कुनामा टाँगोको टावर टावरहरू हो। दुई उन्नतहरू सहित भवन 200 भन्दा बढी मानिसहरूको आवासको लागि डिजाइन गरिएको हो। होटलले लक्जनीबाट लक्जनको विभिन्न स्तरको कोठा प्रदान गर्दछ। ब्लक कोठाहरू ब्लकमा सामान्य बाथरूम छ, सबैजना निजी बाथरूमसँग सुसज्जित छन्, प्रत्येक कोठामा प्रत्येक कोठाको टिभी र मिनी फ्रिज हुन्छ।
मैदान फ्लोरमा अवस्थित मुख्य रेस्टुरेन्ट र क्याफेडहरू, जहाँ यूरोपीयन आगन्तुकहरूको साथ, जापानी र अमेरिकी खाना दिन्छ।
जिम, जिम, फिटनेस केन्द्र, वायरलेस इन्टर्नेट, संरक्षित इन्टरिंग, ताररहित इन्टरनेट, भवनको दुई सम्मेलन कोठा छ - ठूला र सानो, दुबै भोज र व्यवसायिक घटनाहरूका लागि उपयुक्त। रेस्टुरेन्टहरू कन्सर्ट प्रोटर्ट प्रोग्रामहरू र फिल्म छविहरू, अतिथिहरू ट्रान्सफर, भ्रमण प्राप्त गर्न वा यातायात टिकट किन्नको मजा लिन सक्छन्। बच्चाहरूको लागि, एक खेल कोठा सुसज्जित छ, रेस्टुरेन्ट खुवाउने कुर्सी छ।
मिनी होटेल उत्तरी भागमा सेन्ट पीटर्सबर्गमा उत्तरी राजधानीको ऐतिहासिक केन्द्रमा अवस्थित छ, त्यसैले। पहिले, 10 मिनेट पैदल। सबै भवनहरू नजिकै अवस्थित शहरको इतिहाससँग सम्बन्धित छन्। होटल चुपचाप आंगन मा स्थित छ। त्यहाँ पार्किंग मेसिनहरू छन्। ढोका रात बन्द गरियो। पाहुना, जो कार द्वारा आइपुगे, राती ट्रिपहरूको लागि गेटबाट साँचो हुन्छ।
होटेलमा2वटा हेभरिंगमा sours कोठा छन्। पहिलो केसमा त्यहाँ lation अर्थव्यवस्थाको कोठा (एकल, डबल) र एक डबल मानक कोठा हो।
समग्र भान्सामा एक ठूलो फ्रिज, केटल, एक माइक्रोवेभ, एक तातो र चिसो पानी कूलर हो। फलाम र इस्त्री गर्ने बोर्ड प्रदान गरिएको छ।
दोस्रो केसमा - us लक्जरी कोठाहरू। तिनीहरू मध्ये एकको छुट्टै प्रवेशद्वार छ। कोठामा, फ्रिज, एक फ्रिज, तातो र चिसो पानी, शौचालय, स्नान, एक शौचालय, डुब्नु।
सबै कोठाको स्थानीय च्यानल, वाइफाइर, ह्याइर्डर, फ्यान, वा रेडिएटर वा रेडिएटर। दुई तौलिए प्रदान गरीएको छ, डिस्पोजेबल शैम्पू र स्नान जेल।
होटल स्टेशनबाट VASILSIS लेलिस्ट्रोभका मेट्रो स्टेशन - 1.3 किलोमिटर, सेमस्काया मेट्रो स्टेशनहरू, सन्याभाटा र 1 1. किलोमिटर।
<< p> होटल उत्तरी भागमा अवस्थित छ, nevsky संभावना (सीधा रेखा) बाट मेरू स्टेशनमा सात स्ट स्टेशनहरूमा। होटेलबाट टाढा छैन त्यहाँ सबैभन्दा ठूलो मनोरन्जन र शपिंग र मनोरन्जन जटिल छन्: "भव्य क्यानेसन", "NORDON" र "Rodo ड्राइभ"। होटेलले मेडिकल विश्वविद्यालयको शैक्षिक र क्लिनिकलको क्लिनिकल पूरक ओगटेको छ। I. मेचीकोव। विभागीय होटेल (होटल प्रकार होस्टल) स्नातकोत्तर शिक्षा
कसरी प्राप्त गर्ने: कलाबाट। मेट्रो "सिभिल एवेन्यू" बसमा 10 मिनेट सवारी '1 139 , 121, 600, रूट ट्याक्सी, № k K12 1, K11, k114, k111; कला बाट। "बस №121 द्वारा" ज्ञान "को उपयोग" k171, k108, K171, K171, k171, k12, k171, C121 रूट ट्याक्सी नम्बर 1 199 199 , k 118, k118, knams नम्बर 20, tways 58; कला बाट। राउड ट्याक्सी नं C271, K118 को k118, k118 मा laddo मेट्रो स्टेशन।
- एकल, दुई- वा ट्रिपल कोठा ब्लकमा सुविधाहरूको साथ मजदुर मर्मतका साथ। प्रत्येक कोठाको छुट्टै बेडहरू, वार्डरोब, कुर्सी, बेडसाइड टेबल समावेश गर्दछ। ब्लकमा सुविधाहरू घरेलू प्लम्बिंगसँग सुसज्जित छन्।
"उत्तर कोरोना" ऐतिहासिक पछिल्लोलाई प्रकाशित गरियो। वाटेल डिशर्जनले 1
मा निलम्बनको कारण निलम्बन निलम्बित गर्यो
कपू्रुट्टामा "भूल निकास" होटेलहरू ध्वस्त हुनुपर्थ्यो। यो थाहा भयो कि यो एक पूर्व क्रान्तिकारी लाभदायक स्वयंको ऐतिहासिक आधारमा आंशिक रूपमा निर्माण गरिएको थियो। "उत्तरी मुकुट" को अन्तिम विश्लेषणको निर्णय र यसको आवासीय जटिल ठाउँमा निर्माण कूलिपमा छ।
उत्तर कोरोनालाई उत्तर कोरोनालाई वर्षको अन्त्य नभएसम्म कात्पोभक नदी तटरमा उक्त नामको लागि उक्त नामको भ्रष्टाचार स्थगित भयो। ऐतिहासिक भाग र "मासु" भवनको भवनबाट रह्यो, जसले केँगीको साथ झुण्डिरहेको छ। तयारी बिना असमानहित परिणामले नजिकैको पेट्रोग्राड साइडका ऐतिहासिक भवनहरूका लागि दुखद परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ।
<< p> उत्तर कोरोना होटल सबैभन्दा प्रसिद्ध सेन्ट पीटर्सबर्गको एक मध्ये एक मानिन्छ। उनलाई ध्वस्त पार्न सजाय दिइयो, र खोल्न समय थिएन। तर भवनको ध्वस्त हुँदै। त्रासदीले केवल नागरिकहरूको आँखामा नराम्रो प्रतिष्ठाको जरामा राख्यो।